३० कटेको आरोपित पललाई छोडी नाबालिकको बारे सोचौं, कानुन बुझेर बोलौँ – Nep Stok
३० कटेको आरोपित पललाई छोडी नाबालिकको बारे सोचौं, कानुन बुझेर बोलौँ
फागुण २१, २०७८ शनिबार 230
काठमाडौं ।अभिनेता पल शाहले एक नाबालिक”लाई ज” बर्जस्ति क”रणी गरेको प्रकरणमा विभिन्न कलाकारले आफ्नो भनाइ राखिरहेको बेला पूर्वमिस नेपाल शृंखला खतिवडाले पलको पक्षमा बोलिरहेकाहरूलाई जवाफ दिनुभएको छ ।
इनस्टाग्राम स्टोरीमार्फत उहाँले एक वयस्क व्यक्तिले नाबालिग”माथि यौ” नसम्बन्ध राख्नु का”नुनविपरीत रहेको भन्दै अ”पराधीको पक्षमा नबोल्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
‘मलाई अझै विश्वास लागिरहेको छैन कि मानिसले एक नाबालिगको साटो ३० वर्ष नाघिसकेका आ”रोपित”लाई समर्थन गरिरहेका छन् । त्यो सम्बन्धले किशोरीमा कस्तो मानसिक प्रभाव पारेको छ भन्ने तपार्ईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? हो उनी जताततै अन्तर्वार्तामा देखिएकी छन् । तर यसको मतलब यी सबै कुरा बुझ्न उनी परिपक्व भएकी छैनन् ।’
यो घट”नाबाट नेपालीहरूमा चेतना”को निकै कमी भएको देखिएको उहाले बताउनुभएको छ । नाबालिगसँगको यौ”न सम्बन्धबारे बनेका कानुनबारे बुझ्नसमेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । ‘उसले यस्तै चाहन्थिइन भन्नुहुन्छ भने तपाइँ पी”डकलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ ।
यदि नाबालिगले नै यसो गर्न चाहेकी हुन् भने ‘हुन्न’ भन्ने वयस्कको काम हो । किनभने निर्णय लिनेमा उमेरले पी”डित सानी छिन् । जबकी शाह उनीभन्दा धेरै उमेरका थिए’ शृंखलाले लेख्नुभएको छ ।
यो घटनाबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूले पाठ सिक्न जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले लेख्नु हुन्छ, ‘अहिले पनि धेरै नाबालिगले आफूभन्दा निकै पाको उमेरका जीवनसाथीसँग यौ” नसम्बन्ध स्थापित गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको जीवनमा गहिरो घाउ बनाइदिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता का”नुन बनाइएको हो । यस्ता कानुनले नाबालिग ‘किशोर किशोरी’लाई फाइदा उठाउन खोज्नेहरूबाट ब”चाउन्छ ।’
अभिनेता पल शाहविरुद्ध एक नाबालिग गायिकाले उजुरी दिएपछि जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थपेसँगै पल यतिबेला तँनहु जिल्ला प्रहरी हि’सासतमा हुनुहुन्छ ।
Prevपल शाह विरुद्ध दुर्गेश थापाले पनि दिए जाहेरी
Nextबलात्कारमा दोषी ठहरिए पल शाहलाई कति हुन्छ सजाय, कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया? (हेर्नुहोस भिडियो)